नेपाल आज | भाटभटेनीका मालिक गुरुङ्गको गोरखधन्दामा खतिवडा र खरेलको साथ !
०५० सालमा नेपाल बैंकको (सहायक प्रबन्धक) जागिर छोडेर ब्यापार सुरु गरेका मिन वहादुर गुरुङ्ग यति वेला अरवौका मालिक छन् । पत्निको गहना वेचेर सुरु गरेको ‘भाटभटेनी सुपर मार्केट’ ले अहिले उनलाई सोच्दै नसोचेको स्थानमा पुर्यायो।
खोटाङ्गवाट अध्ययनका लागि धरान झरेका गुरुङ्ग ०३१ सालमा काठमाण्डौ पसेका हुन्। उनले अध्ययनकै क्रममा नेपाल बैंकमा कार्यसहायक पदमा जागिर शुरु गरे । जागिरिकै क्रममा उनले त्रिभुबन विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस किर्तिपुरबाट अर्थशास्त्रमा एमए पास गरे ।
यस विचमा उनकी पत्नि सावित्री भाटभटेनीमै दुईटा सर्टर भाडामा लिएर खुद्रा पसल गर्थिन । गुरुङ्ग पसलमा विहान वेलुका काम गर्थे । सोहि पसलले उनलाई ब्यापार/ब्यवासयमा आकर्षित गर्यो । ०५० सालमा नेपाल बैंकको अधिकृत पञ्चम (सहायक प्रबन्धक) पदबाट राजीनामा दिए। ०५० भदौ १ गते नक्सालमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर खुल्यो ।
आजको मितिसम्म देशका मुख्यमुख्य शहरमा भाटभटेनीका शाखा खुली सकेका छन् । दिनमै करोडौंको कारोवार छ। छोटो समयमा उनले ठुलो सफलता पाएका छन् । तर, २६ वर्ष १ महिनाको छोटो समयमा गुरुङ्गलाई मात्र प्राप्त भएको यति ठुलो सफताको पछाडि के ले काम गर्यो? यो पाटो सवैको चासोको विषय भएपनि सधैंभरी गौण छ।
यस विषयमा नत गुरुङ्ग वोल्छन्, नत सरकार वोल्छ । देशका गिनेचुनेका मान्छे मध्येमा गुरुङ्गको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। राजनितिक दलका नेता, सरकारका मन्त्री तथा शक्तिशाली ओहोदाका मान्छेसँग उनको उठवास छ। यो सम्वन्धलाई उनले ब्यवसाय र आफनो प्रवर्धनमा भरपुर उपयोग गरेका छन् ।
कुनै समय गुरुङ्गसँग पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नाम जोडियो । भाटभटेनी प्रचण्डकै हो भनेर हल्ला चल्यो । उनले त्यसलाई पनि उपयोग गरे। हल्लाको विषय हालसम्म पनि पुष्टि त भएको छैन तर प्रचण्डकै पैसाको हेराफेरीवाट भाटभटेनीले यो मुकाम प्राप्त गर्यो भन्ने विषय चाहि अहिले पनि चर्चाकै विषय छ। प्रचण्डले पनि त्यो विषयमा मुख खोलेनन्। उनको मुख वन्द रहनु गुरुङ्गका लागि वरदान सावित भयो।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको, म्याद गुज्रेका सामग्री विक्रि गरेको, एमआरपी भन्दा वढि मुल्य लिएर सामान वेचेको लगायतका आरोप भाटभटेनीले सुरुदेखि नै खेप्दै आएको हो । भुकम्पको समयमा भूकम्पपीडितलाई कुहिएको चामल बिक्री गरेको विषयमा पनि भाटभटेनी विवादमा पर्यो । भूकम्पपीडितले जुत्ताको माला लगाउन तयार भएपछि माफी मागेर र क्षतिपूर्ति तिरेर गुरुङ्गले ज्यान वचाए ।
कर छलि गरेको विषयमा त सर्वोच्च अदालतले नै पुष्टि गर्यो। मूल्य अभिवृद्धि कर छली र त्यसका आधारमा आयकर समेत छली गरेको आधारमा अदालतले ८० करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्नु पर्ने फैसला सुनाएपछि उनी प्रतिका आरोप मोटामोटि पुष्टि भए ।
यसैगरी, गत वैशाखमा पनि दैनिक उपभोग्य सामानमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई तीन लाख जरिवाना गरेको छ ।
केहि समय अघि पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु र वहालवाला मन्त्री समेत तानिएको चर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा गुरुङ्गको पनि संलग्नता देखियो । सरकारले १५ मंसिर ०२१ मा क्षतिपूर्ति/मुआब्जा दिएर खरिद गरेको २८४ रोपनी मध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीको मिलेमतोमा मीनबहादुर गुरुङ्गले खरिद गरेको पाईयो ।
व्यक्तिका नाममा सारिएको बालुवाटारको ११२ मध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएका थिए । उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए । कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरु गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए । गुरुङले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेका थिए भने बाँकी जग्गा छोरो कल्याणसहित ५ जना आफन्तका नाममा राखिएको थियो ।
गैरकानूनी तरिकाले राजकुलो, बाटो, पोखरीको जग्गालाई मोही कायम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोतमा परेका उजुरी निस्तेज पार्ने काम गुरुङले नै गरेका थिए। उनको कर्तुत वाहिर आएपछि सरकारी जग्गा संरक्षण अभियन्तालाई धम्काउने काममा समेत गुरुङले गरेका थिए । ‘यो जग्गा गयो भने तिमी पनि रहँदैनौं’ भनेर गुरुङ आफैंले धम्काएको अभियानकर्ता वताउँछन्।
उनी विरुद्ध अख्तियारले जग्गा धनीका रुपमा ११ करोड र सरकारी जग्गा कमिसनका रुपमा बकस लिएकोमा ३९ करोड विगो मागदाबी गर्दै मुद्दा चलाएको छ।
यति मात्रै होईन, भाटभटेनी र त्यसका मालिक मिन प्रसाद गुरुङ्गले ‘अरुको नजरमा नपरेका र अनुसन्धान नै नभएका’ धेरै कालो धन्दा सञ्चालन गरेको आरोप खेपीरहेका वेला प्रचण्डको नाम मात्रैले पनि धेरै वर्षसम्म सुरक्षा कवजको काम गर्यो । प्रचण्डको नाम जोडिनुले उनी विरुद्धका अधिकांश आरोप छानविनको दायरामै आएनन् । अधिकांश आरोप त्यसै हराए ।
गुरुङ्गको यो धुर्त्याई अहिले पनि कम भएको छैन । वरु वढ्ने र सर्ने भईरहेको छ। कुनै वेला प्रचण्डले गरेको काम यति वेला ‘लाभको पदका महारथी’ का नामले परिचित डा. युवराज खतिवडा र महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलले गरिरहेको जानकारहरु वताउँछन्।
खतिवडा र खरेलको आशिर्वादकै कारण गुरुङ्गका अधिकांश काला कर्तुत वाहिर आउनै नपाएको नेकपाका नेताहरु नै वताउँछन् । गुरुङ्ग मात्र होईन, खतिवडा र खरेलले ठुला र घरानीयाँ ब्यापारीको पक्षपोषण हुने गरी काम गरीरहेको उनीहरुको आरोप छ । त्यसवापत उनीहरुले नजराना समेत पाउने गरेका छन् । टिभि, फ्रिज लगायतका सामाग्री उनीहरुको घरमै पुग्ने गरेको एक नेताले दावी गरे।
अधिवक्ता खरेल कानुन ब्यवसायी हुँदादेखि नै ब्यापारीहरुसँग नजिक छन् । उनी धेरै घरानीयाँ व्यापारीका कानुनि सल्लाहकार थिए। अहिले पनि ति ब्यापारीसँगको हिमचिम र साँठगाँठ टुटेको छैन ।
यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर, सांसद, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारकार हुँदै अमेरीकाको राजदुतमा सिफारीस भएका खतिवडा पनि कतिपय ब्यापारीका प्रिय पात्र हुन् । उनले सिमित ब्यापारी र विदेशीको लाभका लागि काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
प्रचण्ड, खरेल र खतिवडा मात्र होईन। सिमित स्वार्थका लागि ब्यापारीको सुरक्षा कवज वनेर वसिदिने दलका नेता, सरकारका मन्त्री र समग्र देशको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त वनाउने जिम्मा लिएका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुकै कारण गुरुङ्ग जस्ता ब्यापारी रातारात अरवपती र नागरिक कङ्गाल भईरहेको उनको वारेमा वुझेका ब्यक्तिहरु तथा नेकपाका नेताहरुको भनाई छ ।